တရုတ် VT-SS1502 VTIME စက်ရုံ OEM ဇိမ်ခံကားအမျိုးသားများရဲ့ 2-Tone ကို Chronograph သံမဏိစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Vtime
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-769-82834780
စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Box ကို
ပလပ်စတစ် Band နှင့်နာရီ
VT-SS1505 စိတ်တိုင်းကျဒီဇိုင်းဘက်စုံသုံး Dual-St Dial ...
VT-N1415 ဖက်ရှင်က Ultra Slim နေတိုးတပ်ဖွဲ့ Band နိုင်လွန်သံမဏိစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
VT-SS1502 VTIME စက်ရုံ OEM ဇိမ်ခံကားအမျိုးသားများရဲ့ 2-Tone ကို Chronograph သံမဏိစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
This isahigh quality and very luxury looking chronograph watch men, both the watch bracelet and case are made of top quality 316L solid stainless steel with steel clasps, assembled with professional Japanese chronograph movement, complete watch can reach excellent 5ATM water resistance. For OEM order, we can add client’s brand on watch dial & case back, buckle, crown, custom box. WATCH FEATURES Model No. VT-SS1502 Movement MIYOTA OS20 Case Material 316L Stainless steel Case...
MOQ: 500 ပိုငျးပိုငျး
စျေး Range: $25.60-$32.58
ဒီ chronograph လက်ပတ်နာရီယောက်ျားရှာနေတဲ့အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးအလွန်ဇိမ်ခံဖြစ်ပါသည်, နာရီလက်ကောက်များနှင့်အမှုနှစ်ခုလုံးကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂျပန် chronograph လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူစုဝေးသံမဏိ Clasp နှင့်အတူထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့် 316L အစိုင်အခဲသံမဏိ၏လုပ်နေကြတယ်, ပြည့်စုံလက်ပတ်နာရီကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ 5ATM ရေခုခံရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
OEM အလို့ငှာ, ကြှနျုပျတို့လက်ပတ်နာရီကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု & ကိစ္စတွင်နောက်ကျော, ထိကပေါက်, သရဖူသည်, ထုံးစံသေတ္တာအပေါ် client ကိုရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ထည့်နိုင်သည်။
မော်ဒယ် N က ဏ။ VT-SS1502
လှုပ်ရှားမှု MIYOTA OS20
ဖြစ်ရပ်မှန်ပစ္စည်း 316L သံမဏိ
ဖြစ်ရပ်မှန် အချင်း 46mm
သိုင်းကြိုးပစ္စည်း 304 သံမဏိအစိုင်အခဲတီးဝိုင်း
သိုင်းကြိုးအကျယ် max ကို 22cm ပတ်လည်အတိုင်းအတာ 24mm,
စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Dial 3D အညွှန်းကိန်း, စူပါတောက်ပနှင့်ပြည့်စုံစိန်ဖြတ်တောက်လက်အား
စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Glass ကို coated Anti-ခြစ်ရာနီလာကျောက်သလင်း
ထိကပေါက် ပစ္စည်း ချိန်ညှိသံမဏိထိကပေါက်,
ဖြစ်ရပ်မှန် Back အစွန်းခံသံမဏိ
ရေစိမ်ခံနိုင်သော5ATM စက်များ
logo ရာထူး နောက်ကျော Dial & ဖြစ်ရပ်မှန်အပေါ်ရရှိနိုင်စိတ်ကြိုက်အမှတ်တံဆိပ်, ထိကပေါက်, သရဖူ
နမူနာခဲ time စိတ်ကြိုက်နမူနာဘို့ 30-35 ရက်အတွင်း
ထုတ်လုပ်မှုအချိန် စစနမူနာအတည်ပြု 60-70 နေ့ရက်များပြီးနောက်
အာမခံချက် ပုံမှန်လင်းကျောက်နာရီ6လအာမခံ,မြင့်မားတဲ့အဆုံးသံမဏိနာရီများအတွက် 1 နှစ်အာမခံ
ငွေပေးချေမှုရမည့် မျက်မှောက်, အာမခံငွေ, PayPal က, Western Union မှာ T / T, L ကို A / C
ယခင်: VT-LS1961 OEM Leather Band Quartz Movement Chrono Small Second Watch
နောက်တစ်ခု: VT-SS1503 Professional ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စက်ရုံစေထိပ်တန်းဇိမ်ခံကားအမျိုးသားများရဲ့ Bicolor သံမဏိသတ္တုလက်ကောက် Chronograph စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
2-tone steel band watch
steel watch band with clasp
VT-L1901 မိမိစိတ်ကြိုက်သတ္တုသားရေသိုင်းကြိုး Di ...
VT-L201 Unique Designer Metal Bracelet Touch Sc...
VT-L202 VTIME ODM DESIGNER METAL BAND WHITE LIG...
VT-L205 VTIME ODM CREATIVE METAL BRACELET RED L...
VT-SS1503 Professional ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စက်ရုံစေထိပ်တန်း L ကို ...
VT-SS1504 Classic Men’s Luxury Solid Stai...
VT-SS1505 စိတ်တိုင်းကျဒီဇိုင်းဘက်စုံသုံး Dual-Di ...
နေရပ်လိပ်စာ: No.137 ChangDong လမ်း, Banshi ကျေးရွာ,
ChangPing မြို့, DongGuan စီးတီး,
ဂွမ်ဒေါင်း Pro ကို, တရုတ် 523573
ဖက်စ်: + 86-769-82833002
ဒစ်ဂျစ်တယ်အားကစားစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ , သားရေကြိုးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အမျိုးသားများအတွက်, ဖက်ရှင်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အမျိုးသားများအတွက်, ဦးဆောင်ဖက်ရှင်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, ဖက်ရှင်အမျိုးသားများအတွက်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့, Men Wrist Watch,